“समु’द्र किनार’मा नेहा ‘शर्माकाे बोल्ड अव’तार’मा रहेको १’२ तस्बिर’हरु” – Krazy NepaL
“समु’द्र किनार’मा नेहा ‘शर्माकाे बोल्ड अव’तार’मा रहेको १’२ तस्बिर’हरु”
November 14, 2020 289
बलि’उड चर्चित अभि’नेत्री नेहा शर्मा लामो सम’यदेखि फिल्मबा’ट टाढा छिन् तर उनी लाइ”मला’इटबाट भने कहिल्यै टाढा हुँदिनन् । सामा’जिक संजाल’मा नेहा आफ्ना ‘फ्यानका लागि’ तस्वीर शे’यर गरिरहन्छिन् । अहिले पनि नेहाले विदा’मा घुम्न जाँदाका त’स्वीर शेयर गरे’की छिन् ।
अ’हिले उनी हवाइ आइ’ल्याण्डमा’ छिन् । नेहाले हवा’इबाट केही’ तस्वीर शेय’र गरेकी छिन् । तस्वीर’मा समुद्र कि’नारमा उभिएकी नेहा बिकि’नी टपमा देखिएकी छिन् । यो उ’नको सन किस्ड’ तस्वी’र हो । नेहाले पहि’ले पनि फोटो’शुटकी तस्वी’र शेयर गरेकी थिइन् ।
उनका फोटो’लाई इन्स्टा’ग्राममा निकै मन पराइ’न्छ । नेहाले न् २००७ मा तेलु’गु फिल्म”बाट करिअर सुरु गरे’की थिइन् । २०१० मा उनी इम’रान हाशमी’सँ’ग फिल्म क्रु’कमा बलिउड प्रवेश गरेकी थिइन् । अब उ”नी अ’जय देवग’नसँग फिल्म ताना’जीमा देखिनेछिन् ।
हेर्नुहाे’स् उन’का के”ही तस्विरहरूः
Prev“माता लक्ष्मीकाे वरपर किन बत्ति बलिरहेकाे हुन्छ र किन थाहा छ ? १ चोटी पद्नुस नत्र नजाँदा पुजा अपुरो होला “
Next“ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद उदाङ्गो भएको प्रचण्डको ठहर, यी हुन् ओलीले गरेको १५ गल्तिहरु “
“शान्तिन’गरमा आफ्नो काकाको छोरा संगको र स लि ला भिडि’यो फे’रि भाइरल भयो (हेर्नुहोस भिडियो)”
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (44022)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (12389)